यही हो हामी नर्कमा हुनुको प्रमाण । - Sanibar News
यही हो हामी नर्कमा हुनुको प्रमाण ।
३ दिन अघि कृष्ण टावर र एभ्रेष्ट होटलको बिच भागमा पोलमा आगो लागि भयो, नेट बिजुलिका, केबुलका तार हरु जल्य , केहि बेरमा कम्पनिका गाडिहरु आय तार जोड्य गय , तर टुक्रियका तार र जोड्न ल्याका फोहोरहरु त्यहि छोड्य गय न महानगरले त्यो फोहोर उठायो न कम्पनिले। दायित्व कसको? कि हामि बटुबाको? यो गुण्डा राज कहिले सम्म?
प्लास्टीकको चामल, सिन्थेटिक दुध, एन्टीबायोटिक्स सुई हानिएका कुखुरा र खशी, सुई हानेर रातारात हर्लक्क बढाइका काँक्रा, फर्सी र लौका, विषादी हालिएका तरकारी, प्रिजर्भेटीभ्स कोटेड प्याकेटका फुडहरु, अजीनो मोटो र प्रिजर्भेटीभ्सको मात्रा अत्याधिक भएका चाउचाउ, चिप्स, कुरकुरे र दालमोटहरु, क्यान्सरदेखि किडनीसम्म फेल गराउने विषाक्त रसायन हालिएका कोल्ड ड्रिंक्सहरु, विषाक्त निकलले भरीपूर्ण चकलेटहरु, क्याफीनको मात्रा अत्याधिक भएको रेडबुल, कुनै पनि बेला हर्ट या ब्रेनमा सडेन अट्याक गराउनसक्ने केमीकल मिसाइएका मदिराहरु, अल्कोहल हालिएको एप्पल साइडर, पार्टी प्यालेसमा अत्याधिक जलेर कार्वनीक रियाक्सन भइसकेका तेलमा पकाइएका परिकारहरु, धुलो, धुवाँ र त्यसमाथि घन्टौंको जाममा फँस्दा नाकबाट भित्र पस्ने सिसाका सुक्ष्म कण र कार्वनलगायतका असंख्य विषाक्त रसायन, हिलाम्य बाटो, भत्केका अस्तव्यस्त घरहरु, सडकमा छताछुल्ल ढलको दुर्गन्धीत लेदो, तर्लाङ तुर्लुङ यत्रतत्र बाटोमा अलपत्र विजुली, फोन र केवलका तारहरु, जोगीका जटाभन्दा बढता बेरीएका ति तारहरुको गुजुल्टो, मेलाम्ची र सडक विभागले पालैपालो खनेको खाल्डो, युगौंदेखिको अभाव, गरीबी र बेथितीका कारण विक्षिप्त मन बोकेका हामी नेपाली, सानो निहुँमा भइरहने झगडा र हिँशा ।
“नर्क” यो भन्दा नराम्रो होला ?
Previous निर्वाचन सकिएका नगर र गाउँपालिकामा निम्न प्रयास हुदैछ्न अरे होस गरौं।
Next बजारमा आयका मेहेन्दि रासायनिक ज्यादा क्यान्सर हुनसक्छ होस गर्नुहोस?